တိုက်ခန်း - ဇောတိကအိမ်ရာရှိ_ပထမထပ်ရောင်းမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: ဇောတိကအိမ်ရာရှိ_ပထမထပ်ရောင်းမည်
#ဇောတိကအိမ်ရာရှိ_ပထမထပ်ရောင်းမည်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ⭐ သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဇောတိကအိမ်ရာ ⭐ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကျောကပ် ⭐ အကျယ်အဝန်း(25´×25´), 1_Floor. ⭐ 2_Bedroom, Air con, ပါကေးခင်း။ 💰 စျေးနှုန်း_၄၅၀သိန်း 📲📲📲📲📲 ++++++++++++ 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-340 185 131, 09250 998 522.